KUFUNEKA SONYUSE IBHARI YEMIBONISO BHANYABHANYA YE-LGBTQ - UKUMELWA KWE-LGBTQ
Umary Kunye Namagqwirha Intyatyambo
Kufuneka sonyuse iBar ye-LGBTQ + yokumelwa kwimiboniso yoopopayi
Isiqingatha sam sonwabile ukuba kukho ukumelwa okungaphezulu kwe-LGBTQ + kwisizukulwana sanamhlanje semiboniso yoopopayi, evumela abantwana banamhlanje ukuba bafumane ukumelwa esingazange sibe nako phambi kokukhula, ngokunyuka kwemiboniso efana USteven Universe kwaye IVolonti , kunye nefandoms yabo enkulu kunye nokuthandwa. Nangona kunjalo, esinye isiqingatha sam siyazi ukuba sithathe amanyathelo nje kuphela, kunokuba sithathe amanyathelo amade ukuze sifumane ukumelwa kwe-LGBTQ + kwiifilimu ukuze sibe apho siyifuna khona.
Ndiza kuqala ngokuntywila kulo mbandela ngomnye wemiboniso engaphezulu (kwe) edumileyo emva kwexesha IVoltron: I-Defender Defender . Ngaphambi kokuba ndive nomboniso, ndandisazi ukuba uKlance yenye yeenqanawa ezinkulu zeTumblr-ukudityaniswa kwemiboniso emibini ekhokelayo, uKeith noLance. Ngemiboniso yokubonisa into eboniswa kumdlalo kunye nokuhlekisa kwabayili bemiboniso, uninzi lwakhokelwa ukuba lukholwe ukuba luya kuba lunqulo.
Ndiyathetha, iya kuba ntle kakhulu, akunjalo? Ngelishwa, lahlala liphupha elimnandi kuninzi, njengoko abadali bebandakanyeka nento encinci esithanda ukuyibiza ngokuba ngumkhuselo. Ukumema u-Queer kubhekisa kwinto eyenzekayo xa abadali beendaba beqhula abalandeli ukuba abalinganiswa abathile bangamafanasini / abathandana nabasetyhini / abatshatileyo / abathandanayo, njl njl.
Kwaye oku akuphelanga ngeKlance.
Kwixesha lesi-7, uAdam waziswa kumdlalo weqonga njengesihlobo sikaShiro, IVolonti ’Kuphela umlinganiswa ophambili oqinisekisiweyo wesini, kwaye abalandeli balomboniso bapontshwa ngethuba lokufumana ukumelwa okusemthethweni… bade babona ubuso buka-Adam kudonga lwesikhumbuzo.
Ewe. IVolonti , ngonyaka we-2018, benze into esithanda ukuyibiza ngokuba bangcwabe abantu besini sini, nto leyo trope kwimidiya apho kubulawa khona abalinganiswa abathandanayo. Ixesha elifutshane nelifutshane lokuba kutheni le trope inobungozi kuthetha ukuba abantu bendima ekukuphela kwayo ye-LGBTQ kukufa kabuhlungu, into edelekileyo ukuba ichaze.
Ukongeza ekufeni kuka-Adam ngokungeyomfuneko, ubudlelwane buka-Adam noShiro abuzange buboniswe ngokucacileyo kumdlalo, kwaye ukuba umntu wangaphandle wayejonge ngaphakathi, ngekhe bazi ukuba bobabini babenobudlelwane-kuphela ukuba bajonge ku-Twitter. Khange sifunde kuJ. Ukwenza irowling yokuqinisekisa izinto kwi-Twitter akubalwa njenge- # Progressive?
IVolonti wenza elinye iinzame zokugqibela kummelo we-LGBTQ + ngexesha lokugqibela kolu ngcelele, ngomtshato kaShiro kwindoda engachazwanga negama elingaphuhliswanga, kodwa yafika emva kwexesha kakhulu, njengoko abadali bemiboniso bengenzanga lukhulu ukutyhala i-LGBTQ + efanelekileyo. Ngaphezulu kwekhosi ye IVolonti 'Amaxesha onyaka asibhozo.
UShiro noAdam kwi IVoltron: I-Defender Defender . (umfanekiso: Netflix)
Okulandelayo kwipleyiti yengxoxo ngu USteven Universe . Yanconywa okoko yakhululwa njengomnye woovulindlela abaphambili beliza langoku le-LGBTQ +, kwaye anditsho ukuba khange yenze manyathelo abalulekileyo ekufuneka enziwe ingxelo, kodwa ndicinga ukuba kufuneka sithathe USteven Universe kwisiseko sayo.
Ukubuyela umva kwasekuqaleni kuka-2015, isityhilelo sokuba uGarnet, omnye wabalinganiswa abaphambili, yayiyingxubevange yabalinganiswa abohlukeneyo: i-Gems Ruby kunye neSapphire. Kuluhlu lwamanqaku, oku kulapho iiGems ezimbini zidibanayo ukwenza i-Gem enye. I-Fusion ihlala ichazwa njengophawu lobudlelwane, ke ayimangalisi into yokuba uninzi lwabalandeli babetsala ulwalamano lukaRuby noSapphire, ngakumbi kuba iziqendu ezijolise kubo bezizezona zibalaseleyo kolu chungechunge.
Nangona kunjalo, ezi zazimbalwa kakhulu kwaye zikude kakhulu, kwaye akukho sizathu sokwenza oko xa lalikhona ixesha elininzi kumboniso weziqendu zangoku ze-160.
namhlanje bonisa ukuba yintoni i-intanethi
Imagazini elandelayo kukuba ukuxubana ngabalinganiswa abahlukeneyo kwizibini ngokwabo ngoko ke uRuby noSapphire babonisa kuphela xa behlukana, okwenzeka kuphela kwiziganeko ezizodwa kwixesha elide lomboniso. USteven Universe Ngaba lenza into ebalulekileyo yokuba nomtshato wokuqala wabasetyhini kwimiboniso yabantwana (eboniswe ngasentla), kodwa kuyadimaza ngakumbi xa isiqingatha sesibini sesi siqendu sikhokelela kwisiphelo esithi Masibe nemfesane nabantu abathanda ukubulala satsho isibini esithandanayo xa sibona. Okungakumbi ngeli xesha elinye.
Emva koko, makhe sijonge ubudlelwane bukaPearl noRose / Pink Diamond, okanye ngakumbi, uthando lukaPearl olungafakwanga kuRose / Pink. Ukuya kwimbali yomboniso kunye nokutyhilwa, uPearl wayeyiperile yePinki yeDayimani, ngokusisiseko ikhoboka leziqweqwe eziphezulu zeGem Homeworld. Oku sele kubeka ubudlelwane babo kumhlaba ongenampilo ngenxa yokuba i-Pink Diamond / iRose eyeyakhe I-Pearl kunye neRose / Pink ephela kuphela kulwalamano kwaye ikhokelela uPearl. Ngamanye amagama, kukuhlukumeza, ubudlelwane bodwa.
Iya kuba ngumdla kumdlalo oza kuthetha malunga nokuxhatshazwa kwi-LGBTQ +, kodwa loo mzuzu awungeni ndawo USteven Universe , njengoko umboniso uthanda ukuhombisa ngaphezulu.
Inye into ebalulekileyo yokumelwa okuhle kwe-LGBTQ + kukubonisa ubudlelwane obunempilo ukunceda ukwaphula ibala lokuba ubudlelwane be-LGBTQ + yile nto imbi. Ayizukuba yinto embi ngokwemvelo ukubonisa ubudlelwane obungenampilo kuluntu lwe-LGBTQ +, kodwa kuya kufuneka (1) uyiqwalasele ukuba ayinampilo kwingxelo, kwaye (2) uyichase ngemizekelo emihle ngakumbi ukuze unganikeli galelo uhlobo olukhankanyiweyo ngasentla.
UCatherine Parr umdlali weqonga
Ukanti, USteven Universe ayenzi nenye yezi zinto zimbini.
I-Pearl kunye neRose eSteven Universe. (umfanekiso: Inethiwekhi yeKhathuni)
Ngokumelwa kwabantu abangabambisanga, USteven Universe inika into encinci ngoStevonnie, ukudibana phakathi kukaConnie noSteven. Ngelishwa, oku kuwela kwimicimbi efanayo yeGarnet, ngendlela ekunqabile ukuba iboniswe kumdlalo ogcina izihlandlo ezikhethekileyo, kwaye abavumelekanga ukuba babekhona njengabalinganiswa babo kumdlalo, endikucebisa ukuba ufundwe ngakumbi ngale nto inqaku.
Ukuthetha ngeminye imiboniso, Indlu ephezulu kwiNickelodeon ibonakalise ngakumbi ngokubonisa ootata ababini bakaClyde njengabalinganiswa abaphindayo kubudlelwane obusekwe ngokucacileyo, kunye nokutyhila uLuna Loud ukuba abe nesini. She-ra kunye neeNkosazana zaMandla ibonakalise ukubanakho ngokufaka iikhowudi kubalinganiswa abaphambili njenge-LGBTQ +, kodwa nangona kunjalo, ayonelanga. Umboniso wasigcina isityhilelo sokuba uBow unabazali ababini kuluhlu lwe-LGBTQ + njengodidi lwabaphangi, kwaye iSpinerella kunye neNetossa ngabalinganiswa bangasemva kwaye bebonke abonelanga ngokwaneleyo kumdlalo ngokwawo.
Ixesha lokonwaba uncike kancinci ngakumbi ngoBubbline, ubudlelwane phakathi kweNkosazana uBubblegum kunye noMarceline, ababeneziqendu ezithile eziphuhlisa ubudlelwane babo emva koko babelana ngokwanga nokuphela kovuyo kumdlalo wokugqibela. Nangona kunjalo, oku kusaqhubeka nendlela yokuqinisekisa ubudlelwane ngomzuzu wokugqibela. Kutshanje, INkosana yeNamba KwiNetflix yongeze isibini esibi se-lesass ngo-Queen Annika no-Queen Neha, kodwa ngelishwa bakhupha iphepha IVolonti kwaye wabangcwaba ngaphakathi kweziqendu ezibini.
Ngelixa abadali bezama ukwenza ukumelwa okuhle kwe-LGBTQ + kulungile kwaye konke, akwanele xa kufikelela kwimbonakalo encinci ye-cameo, iindima ezixhasayo, kunye nokongeza kwiitropiki ezimbi. Ndiyaqonda ukuba iifandom ze-LGBTQ + ziye zalamba ngokungafanelekanga ngomxholo, kwaye ayilotyala le-LGBTQ + fandoms ngokudlala ngabadali abanje.
Kuyacaphukisa ukuba xa ukhalaza ngale nto, ufumana iimpendulo ezinje, Hayi ungavuya ukuba unayo nayiphi na into emelweyo, elinganayo nokuxelela umntu olambileyo ukuba onwabe ngezidumbu zetafile. Ibha yokumelwa kwe-LGBTQ + kwimiboniso yoopopayi inyuke kancinci kule minyaka idlulileyo, kodwa kufuneka iphume emhlabeni okwangoku.
(umfanekiso obonisiweyo: Inethiwekhi yeKhathuni)
Umbhali onomdla, uKumkanikazi weJewel uthanda zonke izinto zesayensi, Idabi leenkwenkwezi , Disney, Marvel kunye nezinye izinto ezintle kunye neengcamango! Injongo yakhe kukubeka yonke imbono yakhe, ukuthanda kunye nokujonga ekubhalweni kwakhe. Abalinganiswa bakhe abathandayo abasisigxina baquka uFinn, Moana, Rey, Poe Dameron kunye no-Belle. Unobudlelwane obuthile bebhayoloji kunye nendawo ethambileyo yezidalwa ezimnandi.
Iingxaki Zokuqala Zehlabathi
isenzo esingahleliwe senkxaso mali robert downey jr
UMary kunye nentyatyambo yomlingo
cowboy bebop valentine yam ehlekisayo
Incwadi yefilimu efileyo ngo-2014
mr t umhlaba weemfazwe